NDA & Fiarovana amin'ny zon'ny mpamorona - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ao amin'ny Fumax, fantatray fa zava-dehibe ny hitazomana ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa. Fumax dia manome antoka fa ny mpiasa dia tsy hamoaka antontan-taratasy famolavolana amin'ny antoko fahatelo raha tsy misy fankatoavana an-tsoratra avy amin'ny mpanjifa.
Amin'ny fiantombohan'ny fiaraha-miasa dia hanao sonia ny NDA izahay isaky ny mpanjifa. Santionany NDA mahazatra toy ny etsy ambany:
Fifanarahana momba ny famoahana ny aotom-bolo
Ity fifanarahana famoahana tsy fifanarahana ((ny "Fifanarahana") ity dia natao ary niditra tamin'ity DDMMYY ity, teo anelanelan'ny:
Fumax Technology Co., Ltd. Orinasa CHINA / orinasa ("XXX"), miaraka amina toerana lehibe misy ny orinasa ao amin'ny 27-05 #, East block, kianja YiHai, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, China 518054,
mpanjifa Namanay, miaraka amin'ny toeram-piasana lehibe misy azy ao amin'ny 1609 av.
taorian'izay dia nantsoina hoe 'Antoko' na 'Antoko' ity fifanarahana ity. Ny fahamendrehan'ity antontan-taratasy ity dia 5 taona hatramin'ny datin'ny sonia.
IZANY, ireo antoko dia mikasa ny hijery ny fahafaha-miasa eo amin'ny sehatry ny asa ary, mifandraika amin'izany, dia afaka mifampilaza momba ny tsiambaratelo na momba ny tsiambaratelo.
IZAO, noho izany, ireo mpifanaraka dia manaiky toy izao:
Andininy I - Fampahalalana ho an'ny PROPRIETARY
Ho an'ny tanjon'ity fifanarahana ity, ny "Fampahalalana momba ny fananana" dia midika ho fampahalalana an-tsoratra, fanadihadiana na am-bava na inona na inona ambaran'ny antoko na antoko iray amin'ny iray hafa ary marihin'ny Antoko mpanambara miaraka amin'ny angano, hajia, marika na marika hafa izay manondro ny maha-tompony na tsiambaratelo azy. , ao anatin'izany, saingy tsy voafetra amin'ny, (a) fampahalalana momba ny orinasa, ny drafitra, ny varotra na ny lafiny teknika, (b) modely, ny fitaovana, ny fitaovana ary ny rindrambaiko, ary (c) misy antontan-taratasy, tatitra, memoara, naoty, rakitra na fanadihadiana nomanin'ny na amin'ny anaran'ny antoko mandray izay misy, mamintina na mifototra amin'ireo voalaza etsy ambony ireo. "Fampahalalana momba ny fananana" dia tsy tokony hampiditra fampahalalana izay:
(a) azo ampahibemaso alohan'ny datin'ny fifanarahana ity;
b) nanjary azo ampahibemaso aorian'ny datin'ny Fifanarahana ity amin'ny alàlan'ny tsy fihetsika tsy mety ataon'ny antoko mandray;
(c) natolotry ny antoko mpanazava amin'ny hafa fa tsy misy fameperana mitovy amin'ny zon'izy ireo hampiasa na hampiharihary;
(d) fantatry ny antoko mandray tsy misy fameperana arak'asa amin'ny fotoana nahazoana izany vaovao izany avy amin'ny antoko mpanambara na lasa fantatry ny antoko mandray raha tsy misy fameperana arahin'olona avy amina loharano hafa ankoatry ny antoko mpanambara;
e) novolavolain'ny antoko tsy miankina amin'ny alàlan'ny tsy miankina izay olona tsy nanana fidirana mivantana na an-kolaka momba ny Fampahalalana momba ny fananana; na
f) dia voatery hamokatra eo ambanin'ny didin'ny fitsarana manana fahefana mahefa na taratasy fiantsoana ara-panjakana na ara-panjakana, raha toa ka mampandre avy hatrany ny Antoko nanambara izany hetsika izany ny Antoko mpanafika mba hahafahan'ny antoko manazava mitady fangatahana fiarovana sahaza azy.
Ho an'ny tombo-tsoa teo aloha, ny famoahana izay manokana, ohatra ny momba ny teknika sy ny teknika ary ny teknika, ny vokatra, ny lozisialy, ny serivisy, ny masontsivana sy ny asa sns ... dia tsy tokony hoheverina ho ao anatin'ireo fehezanteny voalaza teo aloha fotsiny satria noraisin'ny famoahana ankapobeny izay eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe na eo am-pelatanan'ny Mpandray. Ho fanampin'izany, ny fampifangaroana endri-javatra rehetra dia tsy heverina ho ao anatin'ireo fanavakavahana etsy ambony satria fotsiny ny fisehoan-javatra tsirairay avy dia eo amin'ny sehatry ny besinimaro na eo am-pelatanan'ny Mpandray, fa raha tsy ny besinimaro sy ny fitsipiky ny fiasa no ampahibemaso. sehatra na fananan'ny Antoko mandray.
Andininy II - Fahatokisana
(a) Ny Antoko mandray dia miaro ny fampahalalana momba ny fananana an'ny antoko Partager ho fampahalalana tsiambaratelo sy fananana ary, afa-tsy ny fahazoan-dàlana an-tsoratra avy amin'ny Antoko mpanambara na izay voalaza mazava tsara ao anatiny, dia tsy tokony hampahafantatra, handika na hizara izany fampahalalana ara-bola izany ho an'ny olon-kafa, orinasa na orinasa hafa mandritra ny dimy (5) taona hatramin'ny daty nanambarana.
b) Raha tsy misy ifandraisany amin'ny tetik'asa iraisan'ny Mpifanaraka dia tsy tokony hampiasa ny fampahalalana momba ny fananan-tany an'ny antoko na antoko na orinasa hafa ny antoko mpandray; ho azo antoka bebe kokoa, ny fametrahana fangatahana patanty eo ambanin'ny lalàn'ny firenena na iza na iza avy amin'ny Mpandray mandray miorina, na mivantana na tsy mivantana, amin'ny fampahalalana momba ny fananana an'ny antoko Party dia voarara tanteraka, ary raha toa ka misy ny fangatahana patanty na fisoratana anarana momba ny patanty hitranga amin'ny fanitsakitsahana ny ity fifanarahana ity, ny zon'ireo Mpandray mandray ny fangatahana patanty voalaza na ny fisoratana anarana momba ny patanty dia hampitaina amin'ny Antoko manambara izany, tsy misy vidiny ho an'ity farany ity, ary ankoatry ny fitadiavana fahasimbana hafa.
(c) Ny antoko mandray dia tsy tokony hampahafantatra izay rehetra na ampahan'ny fampahalalana momba ny fananana an'ny antoko antoko na agents, agents, agents, director, mpiasa na solontena (miaraka, "Representatives") an'ny Party mandray afa-tsy amin'ny filàna ilaina- fahalalana fototra. Manaiky ny hampahafantatra ny solontenany izay mahazo ny fampahalalana momba ny fananana an'ny antoko ny antoko mpandray ary ny adidin'ny Solontena toy izany mikasika ny fitazonana ny fampahalalana momba ny fananana mifanaraka amin'ny fehezan'ity fifanarahana ity.
(d) Ny antoko mandray dia tokony hampiasa fahaizana mitovy amin'ny fiarovana ny tsiambaratelo momba ny Fampahalalana momba ny fananana naseho taminy rehefa mampiasa azy io mba hiarovana ny mombamomba azy manokana, fa amin'ny hetsika rehetra kosa dia tokony hampiasa fikarakarana araka ny antonony. Ny antoko tsirairay dia maneho fa ny fikolokoloana toy izany dia manome fiarovana sahaza ho an'ny mombamomba azy manokana.
e) Ny Antoko mandray dia manome torohevitra avy hatrany ny Antoko mpanambara amin'ny alàlan'ny fanoratana momba ny fanararaotana na fanararaotana diso ataon'ny olona iray momba ny fampahalalana momba ny fananana an'ny antoko izay fantatry ny antoko mandray.
f) Izay antontan-taratasy na fitaovana izay natolotry ny na amin'ny anaran'ny Ankolafy mpanambara, sy ny fampahalalana rehetra momba ny fananana amin'ny endriny rehetra, ao anatin'izany ny antontan-taratasy, ny tatitra, ny fahatsiarovana, ny rakitra na ny fandalinana nomanin'ny na amin'ny anaran'ny antoko mandray, ao anatin'izany ny kopian'ny fitaovana rehetra toy izany dia haverina avy hatrany amin'ny antoko mandray amin'ny antoko mpanambara rehefa mangataka an-tsoratra avy amin'ny Antoko mpanambara noho ny antony rehetra.
Andininy III - TSY MISY LISENSES, WARRANTIE NA ZO
Tsy misy fahazoan-dàlana ho an'ny Antoko mandray eo ambanin'ny tsiambaratelo na patanty momba ny varotra omena na misy heviny amin'ny alàlan'ny fampitana ny fampahalalana momba ny fananana na fampahalalana hafa ho an'io antoko io, ary tsy misy na iray aza amin'ireo fampahalalana nampitaina na natakalo izay mety ho fisolo tena, fiantohana, antoka, antoka na famporisihana mikasika ny ny fanitsakitsahana ny patanty na ny zon'ny hafa. Ho fanampin'izany, ny famoahana ny fampahalalana momba ny fananana avy amin'ny Antoko mpanambara dia tsy tokony hanangana na hampiditra solontena na fiantohana momba ny marina na ny fahafenoan'ny fampahalalana toy izany.
Andininy IV - SOROTRA AN-TANY
Ny antoko mpandray tsirairay dia manaiky fa ny fampahalalana momba ny fananana an'ny antoko mpanambara dia ivon'ny asan'ny antoko mpanambara ary novolavolain'ny na ho an'ny antoko mpanambara amin'ny vidiny lehibe. Ny antoko mandray tsirairay dia manaiky fa ny fahavoazana dia tsy ho vahaolana mahomby amin'ny fandikan-dalàna ataon'ity antoko ity na ny solontenany ary ny antoko mpanafika dia afaka mahazo fanampiana hafa na ara-drariny mba hanasitranana na hisorohana ny fanitsakitsahana na fandrahonana amin'ny fifanarahana ity. avy amin'ny Antoko mandray na ny iray amin'ny solontenany. Ny vahaolana toy izany dia tsy azo heverina ho vahaolana manokana amin'ny fanitsakitsahana ity fifanarahana ity, fa tokony ho fanampin'ny fanafody hafa rehetra misy amin'ny lalàna na amin'ny mombamomba ny Antoko mpanambara.
ARTICLE V - TSY MISY vahaolana
Afa-tsy ny alàlan'ny fanekena an-tsoratra avy amin'ny ankolafy hafa, na ny antoko, na ny solontenan'izy ireo, dia tsy hangataka na hangataka asa ho an'ny mpiasa ao amin'ny antoko hafa mandritra ny dimy (5) taona manomboka amin'ity daty ity. Ho an'ny tanjon'ity fizarana ity, ny fangatahana dia tsy tokony hampidirina amin'ny fangatahan'ny mpiasa izay amin'ny alalàn'ny dokambarotra amin'ny famoahana ankapobeny na orinasa mpikaroka momba ny antoko na solontenany, raha mbola tsy nanao izany ny antoko na ny solontenany. tariho na amporisiho ny orinasam-pikarohana toy izany hangataka mpiasa iray voatondro manokana na ny ankolafy hafa.
Andininy VII - TSY MISY
a) Ity fifanarahana ity dia mirakitra ny fahazoana ny hevitry ny Mpifanaraka ary mandika ny fahatakarana an-tsoratra sy am-bava rehetra izay mifandraika amin'ity lohahevitra ity. Ity fifanarahana ity dia tsy azo ovaina afa-tsy amin'ny fifanarahana an-tsoratra nosoniavin'ny roa tonta.
b) Ny fananganana, ny fandikana ary ny fanatanterahana an'ity fifanarahana ity, ary koa ny fifandraisana ara-dalàna ataon'ireo Ankolafy izay mipoitra etsy ambany, dia hofehezina sy holazaina mifanaraka amin'ny lalàn'i Canada, tsy misy fiheverana ny safidy na fifanoherana voalazan'ny lalàna ao. .
(c) Fantatra sy nifanarahana fa tsy misy tsy fahombiazana na fanemorana ataon'ny Ankolafy roa amin'ny fampiasana zon'olombelona, ​​fahefana na tombontsoa eto ambany eto hiasa ho toy ny famelana azy, na koa ny fampiasan-tena tokana na an-tsakany sy an-davany manakana ny fampiharana hafa na ny fampiharana azy io, na ny fampiasana zony, fahefana na tombontsoa hafa eto. Tsy misy fanafoanana ny fepetra na fepetra amin'ity fifanarahana ity heverina ho fandavana ny fandikana ny fe-potoana na fepetra manaraka. Ny fanesorana rehetra dia tsy maintsy voasoratra ary nosoniavin'ny antoko tadiavina hamatotra.
(d) Raha misy ampahany amin'ity fifanarahana ity hotanana, tsy azo ampiharina, ny ambiny amin'ity fifanarahana ity dia mbola mijanona amin'ny heriny tanteraka.
e) Ny famoahana ny fampahalalana momba ny fananana eto ambany dia tsy azo adika ho adidin'ny roa tonta (i) hanao fifanarahana na fifampiraharahana miaraka na hanao fanambarana hafa amin'ny antoko hafa eto, (ii) hisorohana ny fidirana amin'ny ny fifanarahana na fifampiraharahana amin'ny olona fahatelo momba ny foto-kevitra mitovy na ny foto-kevitra hafa, na (iii) fadio ny fikatsahana ny orinasa na inona na inona fomba fidiny; na izany aza, mifandraika amin'ny fikatsahana ny ezaka atao eo ambanin'ny paragrafy (ii) sy ny (iii), ny Antoko mandray dia tsy manitsakitsaka ny iray amin'ireo andininy ao amin'ity fifanarahana ity.
(f) Raha tsy takian'ny lalàna raha tsy misy izany, dia tsy misy fanambarana ampahibemaso ataon'ny Ankolafy momba ity fifanarahana ity na ireo dinika mifandraika amin'izany raha tsy nahazo fankatoavana an-tsoratra avy amin'ny ankolafy hafa.
(g) Ny fepetra voalazan'ity fifanarahana ity dia ho tombontsoan'ny Mpifanaraka eto sy ireo mpandimby azy ary nomena andraikitra, ary tsy misy antoko fahatelo afaka mitady hampihatra, na hahazo tombony amin'izany.
AO AMIN'NY FOMBA FENO IZAO, ireo antoko dia manatanteraka ity fifanarahana ity hatramin'ny daty nanoratana teo ambony.